Taabid Cabdi oo Tallo muhiim ah u soo jeediyay Madaxda Nabad iyo Nolol | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha GudahaTaabid Cabdi oo Tallo muhiim ah u soo jeediyay Madaxda Nabad iyo Nolol
Taabid Cabdi oo Tallo muhiim ah u soo jeediyay Madaxda Nabad iyo Nolol
Guddoomiyihii Gobolka Banaadir ahaana Duqii Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa Madaxda dowladda Federaalka u soo jeediyay tallo ah aad muhiim ah oo ku aadan dhana amniga Caasimadda dalka ee Muqdisho.
Taabid Cabdi ayaa ku teliyay in amniga Caasimadda dalka lagu wareejiyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Finish si loo adkeeyay amniga,maadaama haatan aysan jirin cid qaada Mas’uliyada amniga.
Sidoo kale Taabid ayaa Madxada dowladda Federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay la timaado qorshe cad oo laga sugayo amniga dhammaan degmooyinka Gobolka Banaadir oo mararka qaar ay ka dhacaan falal amni darro xun.
Guddoomiyihii Gobolka Banaadir ahaana Duqii Muqdisho Taabid Cabdi Maxa ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qeyb qaadan sugida Magaalada Muqdisho oo muddooyinkii dambe u muuqday mid faraha kasii badaya,isla markaan ay soo bedenayaa qaraxyda lagu xiyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo dilalka qorsheysan.
Trump oo cunaqabteyn weyn ugu hanjabay Turkiga